Kiosk telefaonina Handset, Hafanàm-po an Keypad, Telephone Hook Switch - Xianglong
Professional orinasa mpanamboatra ny telefaonina sy ny piesy ho an'ny mihoatra ny 12 taona. Ny orinasa no misy ao Yuyao City Shina.
Warranty: 1 taona 'fiantohana sy ny fikojakojana. Ny voalohany taona taorian'ny fandefasana isika, dia ho tompon'andraikitra amin'ny fikojakojana maimaim-poana raha misy olana nateraky ny kalitao mihitsy.
tantera-drano Telephone , Emergency Phone , fipoahana porofo handset, orinasa an-telefaonina handset , Emergency Public Telephone , Weatherproof Telephone ,